Singapaoro: Nogadraina noho ny faniratsirana mpitsara ilay bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Janoary 2019 5:45 GMT
Voasazy higadra telo volana an-tranomaizina noho ny faniratsirana mpitsara ambony tao amin'ny bilaoginy i Gopalan Nair izay nizaka ny zom-pirenena Singapaoreana teo aloha ary nomena ny zom-pirenena Amerikana. Nitatitra ny gazety fa lazain'ny tribonaly fa “nanala baraka … ny fitsarana sy ny sampan-draharahan'ny fitsarana tao Singapaoro” i Gopalan
Voalaza fa naniratsira ny Mpitsara Belinda Ang i Gopalan tao amin'ny bilaoginy momba ny raharaha ara-pitsarana nitorian'ny Praiminisitra Singapaoreana Lee Hsien Loong sy ny Minisitra Mentor Lee Kuan Yew tamin'ny raharaha fanalam-baraka ka nandreseny ny Antoko Demaokraty ao Singapaoro (SDP) sy ny mpitarika azy .
Voalaza i Gopalan fa niampanga ny “Mpitsara Ang” ho “nivaro-tena … ary tsinona fa mpiasakelin'i Atoa Lee Kuan Yew sy ny zanany lahy ary nanatontosa ny baikony fotsiny”. Tamin'ny fiarovan-tenany, nilaza i Gopalan fa nanantena izy fa hanaitra ny fahatsiarovan-tena ara-politika ao Singapaoro tao amin'ny bilaoginy. Niaiky izy fa mety ho mahery ny teniny, kanefa tsy nanenina satria marina ny teniny. Nanolo-tena teo anatrehan'ny fitsarana i Gopalan ary voaheloka araka ny andininy faha 228 ao amin'ny Fehezan-dalana Famaizana ao Singapaoro amin'ny, “fanevatevana niniana natao na fitsabahana amin'ny asan'ny mpiasam-panjakana na inona na inona toerana misy azy amin'ny fizotry ny fitsarana”.
Nambara ny didim-pitsarana mikasika an'i Gopalan fotoana fohy taorian'ny nitorian'ny fampanoavana ankapobeny ao Singapaoro ny fanelingelenana ny fizotram-pitsarana nitoriany ny famoahana ny endrika aziatika amin'ny Wall Street Journal sy ny roa tamin'ireo toniandahatsorany, milaza ny famoahany ho “rikoriko amin'ny tsy fiandaniana, ny fahamendrehana ary ny fahaleovantenan'ny fitsarana ao Singapaoro” ny lahatsoratr'izy ireo.
Araka ny voalazan'ny Reuters, voafehy mafy ara-dalana ao Singapaoro ny fahalalaham-pitenenana sy ny fahalalahana maneho hevitra, indrindra mifandraika amin'ny politika, ny firazanana ary ny fivavahana. Na dia nilaza aza ny governemanta fa ilaina izany mba hitazonana ny fahamarinan-toerana ara-tsosialy sy ara-politika ao amin'ny firenena dia nilaza ireo mpitsikera fa fampiasana diso ny rafitra ara-pitsarana izany.